Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » N'ọkụ: Nnukwu ọkụ malitere n'ọdụ ụgbọ elu Kabul
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Amabeghị ihe banyere ịdị ọkụ ma ọ bụ mmalite nke ọkụ ahụ, mana vidiyo ezigara na mgbasa ozi mmekọrịta na -egosi igwe anwụrụ ọkụ na -ebili site n'ọdụ ụgbọ elu, nke bụ isi ebe mbọ mwepụ US na Western na izu gara aga.
Akuko gbara oku n'ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai.
Nnukwu anwụrụ ọkụ na -akwụ n'elu ọdụ ụgbọ elu.
Ọnọdụ nchekwa n'ọdụ ụgbọ elu ka na -emebi emebi.
O doro anya na nnukwu ọkụ agbaala n'ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai dị na Afghanistan, na -ebugharị ọgbaghara na -aga n'ihu na ọtụtụ puku mmadụ na -achọsi ike ịpụ na mba ahụ.
Akụkọ banyere ọkụ ọgbụgba a mere na mgbede Mọnde. Amabeghị ihe banyere ịdị ọkụ ma ọ bụ mmalite nke ọkụ ahụ, mana vidiyo ezigara na mgbasa ozi mmekọrịta na -egosi igwe anwụrụ ọkụ na -ebili site n'ọdụ ụgbọ elu, nke bụ isi ebe mbọ mwepụ US na Western na izu gara aga.
Ọnọdụ nchekwa n'ọdụ ụgbọ elu ka na -esighị ike, ebe ndị agha US na ndị agha jikọrọ aka na -arụ ọrụ ịchụpụ ọtụtụ puku ndị nkịtị ha na ndị gbara ọsọ ndụ Afghanistan na Kabul. Awa ole na ole tupu ọkụ ahụ amalite, ndị agha US na German banye n'ọgbọ agha na ndị mwakpo a na -amaghị ama, na mgbanwo ọkụ nke gburu otu onye agha Afghanistan. Dịkarịa ala, mmadụ 20 nwụrụ n'ọdụ ụgbọ elu n'izu gara aga, otu onye ọrụ NATO kwuru.
Amabeghị mgbe m na -ede ma ọkụ a na -emetụta ụgbọ elu na -abata na ọdụ ụgbọ elu. Ụgbọ elu na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu na-akwụsịghị na ngwụsị izu, ebe gọọmentị Biden na-ekwu na ha chụpụrụ ihe ruru mmadụ 11,000 n'ime awa 36. Agbanyeghị, ọtụtụ puku ndị ọzọ ka nọkwa na Kabul, na ohere nke US na ndị ha na ya jikọrọ aka ga -emecha ngwụcha August 31 maka iwepụ ya kpamkpam.
Ndị Taliban, bụ ndị weghaara ikike na Afghanistan naanị ihe karịrị otu izu gara aga, adọla aka na ntị maka “nsonaazụ” ma ọ bụrụ na emezughị oge a kara aka.